Leven Rambin Sawirro Qaawan & Muuqaallo Muuqaal Galmo ah - Celebrities Qaawan | June 2021
sawiro qaawan ee kerry washington
carla gugino waligiis ma qaawanaa
ayaa ariana grande waligeed qaawan
sawiro qaawan oo charlize theron
jaime pressly qaawan in playboy
sawiro qaawan oo theron charlize theron
Nolosha Rambin - June 2021
Aynu eegno qaar ka mid ah sawirada jirka raaxada Leven Rambin!
Waa wax fudud sida tan, ha qaadan Life Rambin dameer oo bilow inaad u dirto saaxiibbadaada ama cidda aad mar walba u dirto sidoo kale. Xaqiiqdii haddii aad caan tahay ka fogow dameerka sida ugu macquulsan. Waxaan ka walwalayaa tirada xiddigaha Ciyaaraha Gaajada kuwaas oo aan umuuqan karin inay ku hayaan bobiishooda rajabeetada. Internetku wuu sii duuduubayaa laakiin ohh si fiican waa sidaan ku helayo maskaxdayda daawashada xoogaa xamasad iyo dabadyo xiiso leh. Marka hore waxaan haysanay Jenifer Lawrence oo aan ku dhaartay wuxuu ahaa waxa cajiibka ah ee ka soo baxay Ciyaaraha Gaajada laakiin markii ay gaajadu sii dheeraatay, Leven Rambin wuxuu go'aansaday inuu na siiyo mid kale oo ka mid ah cunnadeeda Boobie.
Leven Rambin wuxuu leeyahay xoogaa naaso waaweyn mise waa inaan dhahnaa labo caanood oo quruxsan!
Blondie waxay u qurux badan tahay magaceeda hana ilaawin iyadu iyaduna way adag tahay, haa hadaad go aansato inaad iyada sameyso kaliya cadaaladdeeda si fiican oo qumman u samee ama waad ku soo bixi doontaa i aamin. Way ogtahay inay ku tuurayso saaxiibadeed agagaarka runti waxay umuuqataa mid xoogan waxaanan hubnaa inay iyadu tahay Dominatrix nooc ama ay jeceshahay inay si buuxda gacanta ugu hayso ninkeeda. Leven-Rambin kuma aysan helin caan caan ku ah sawiradeeda sawirada badan kadib Selena Gomez oo ay la kacday Justin Beiber laakiin hey waxaa laga yaabaa inay noqon karto mid kacsi badan ka dib xidigo kale oo caan ah oo halkaas jooga. Waxay ku dhalatay Laura Alice Rambin-Parrack bishii May 17 1990 waa jilaa Mareykan ah oo caan ku ah doorkeeda Terminator: Sarah Connor Chronicles, One True Hill iyo kuwa kale oo badan. Waxay shaqadeeda bilawday iyada oo 13 jir ah oo ka soo muuqatay taxanaha ABC ee All My Children. Intaa ka dib waxay ka soo muuqatay dhowr filim oo kale.
Isku soo wada duuboo Dhammaadka
Rambin wuxuu dhibbane u ahaa muuqaalo la kashifay halkaas oo aan ku aragno iyada oo koreysa oo dhowr sawir iska qaadaysa muraayadaheeda hortiisa. Iyadu ma lahan boobies-ka ugu fiican meeraha laakiin waxaan dhihi karaa uguyaraan waa kuwo qumman oo nuugi kara sax? Mid kastoo sida ah haddii aad jeceshahay inaad aragto timo cad oo shaashad leh oo bubooyin waaweyn ku leh spandex yoga surwaal si fiican markaa gabadhaani adiga ayey kuu tahay. Jadwalka Tusmada
1. Aynu eegno qaar ka mid ah sawirada jirka jilicsan ee Leven Rambin!
2. Leven Rambin wuxuu leeyahay xoogaa naaso waaweyn mise waa inaan dhahnaa labada feedh ee fiican!
3. Isku soo wada duub dhamaadka